Hitory ny Anaranao amin’ny rahalahiko aho – FJKM Ambavahadimitafo Hitory ny Anaranao amin’ny rahalahiko aho |
Hitory ny Anaranao amin’ny rahalahiko aho
Publié le 29 février 2012 à 12:02
Alahady Karemy voalohany, 26 febroary 2012, fanokanana ny Sampana Tanora Kristiana (STK) eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo sy ny fanamiana
Ny teny nofidian’ny STK hanankinana ny hafatra dia ny Salamo faha-22; 22 : « Hitory ny Anaranao amin’ny rahalahiko aho »
1) Nahoana no mitory ?
2) Inona no toriana ?
3) Inona no vokatry ny fitoriana?
Ny mpitandrina Andriamalala Solomon, Filoha mpanampy STK Foibe no nitondra ny hafatr’Andriamanitra tamin’izany.